4K UHD မော်ကွန်းတိုက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: 4K UHD
(ဇွန် ၂၀၂၀) - မည်သည့်အိုင်ပီကွန်ယက်ပေါ်တွင်မဆိုအားကိုး။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သောအရည်အသွေးရှိသောဗီဒီယိုများကိုဖွင့်လှစ်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင် Zixi က Zixi သည် Bloomberg TV + ကိုတီထွင်ခဲ့သောတော်မူသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံရှိ Zixi ၏စျေးကွက်၏ပထမဆုံး 2020K တိုက်ရိုက် transcode အပြောင်းအလဲ ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိုဂရမ်နှင့်အတူဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ခေတ်မီအဆင့်မြင့်ဒီဂျစ်တယ်သတင်းများကို desktop၊ tablet နှင့်မိုဘိုင်းဝက်ဘ်သို့ပေးပို့ခြင်း ...
အဆိုပါ Highly-မျှော်လင့် Matrox ဧကရာဇ် EDGE encoding အခုတော့သင်္ဘော!
Montreal မှာ Quebec - ဇွန်လ 11, 2019 - Matrox®ဗီဒီယိုယနေ့အလွန်အမင်း-မျှော်လင့် Matrox ဧကရာဇ် EDGE 4K UHD / Multi-HD ကိုကြေငြာခဲ့သည်, Low-အောင်းနေချိန်ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများယခုရေကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ Multi-protocol ကို streaming များ options များနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် 3840G / 2160G-SDI နှင့် SMPTE ST 60 1920 GbE ဆက်သွယ်မှုကမ်းလှမ်းစဉ်ကဤအစွမ်းထက်ဧကရာဇ် EDGE ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများ 1080x60p3 သို့မဟုတ် quad 12x2110p25 ဗီဒီယိုတက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကယ်နှုတ်တော်မူ။ အဆိုပါရုံ $ 7,495 (€ 6,795, £ 5,995) မှာစျေးနှုန်း ...
Montreal - 8: 00 EST မတ်လ 18, 2019 - 4K များအတွက်ကြီးထွားလာကြည့်ရှုသူဝယ်လိုအားကိုထောကျပံ့ဖို့အီတလီထုတ်လုပ်မှုအထူးကု NVP က၎င်း၏အပြင်ဘက်ထုတ်လွှင့် (OB) အားအဆင့်မြှင့်ဘို့, မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden အမှတ်တံဆိပ်ကနေတိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်မရွေးထားပါတယ်စင်းကို UHD နှင့် HDR အကြောင်းအရာ။ NVP ရဲ့ OB4 နှင့်အသစ်ဖြန့်ချိ OB6 မော်တော်ယာဉ်များတွင်တပ်ဆင်, ဒီကြံ့ခိုင်တိုးမြှင့်ခိုင်မာစေ ...
ဆွစ်ဇာလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် RSL များအတွက် UHD / HDR ထုတ်လုပ်မှုအတွက် NEP ဆွစ်ဇာလန်ရှေ့ဆောင်များ
ရာသီအစ 2018 / 2019 ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ NEP ဆွစ်ဇာလန်အဆိုပါ Raiffeisen စူပါလိဂ် (RSL), UHD / HDR အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘောလုံးလိဂ်၌ရှိသမျှသောပွဲကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ 2018 အတွက်စတင်ကတည်းက NEP ဆွစ်ဇာလန် 20 ဆွစ်ဇာလန်ထုတ်လွှင့်လိုင်းကို Teleclub များအတွက် HDR ကို format နဲ့ပေါင်းအတော်ကြာယူရို-လိဂ်ဂိမ်းအတွက်ကိုက်ညီထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ နှစ်ခုတခုတခုအပေါ်မှာ HDR ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူ ...
DSDS နောက်ဆုံး: Studio ကဘာလင်သူတို့ရဲ့နယူး OB9 Truck ကားနှင့်အတူဥရောပရဲ့ပထမဦးစွာ UHD / HDR ကိုမ Live Show သဘောပေါက်
၏နောက်ဆုံးနှင့်အတူဥရောပ UFA ပြရန် & လိုက်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံး timer နေရာမှာအဖြစ် "DSDS - Deutschland တွင်း Superstar စားသောက်ဆိုင် sucht" (ဂျာမန်အဖြစ်မှန်ခွက်တဆယ်ပြပွဲနှင့် "Idol" ဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်း) ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် UHD / HDR အတွက်တိုက်ရိုက်ပြသထုတ်လွှင့်။ နောက်ဆုံး5မေလ 2018 အပေါ်ရာအရပျကို ယူ. MMC ရုပ်ရှင်ပွဲတော် + Studios က Cologne မှာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အပြိုင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ် ...
ကမ္ဘာသစ်ဆငျဖိုနီ Hitachi ကင်မရာများကိုအတူ 4K အနာဂတ်ပြင်ဆင်
Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ Ltd (Hitachi Kokusai - အမေရိကားရဲ့သံစုံတီးဝိုင်းအကယ်ဒမီ 12 Hitachi ကင်မရာများအဆုံးသတ်-to-end ၏အဆင့်တဦးတည်းအတွက်၎င်း၏ပြင်ပ WALLCAST ™ဖျော်ဖြေပွဲစီးရီးများနှင့်အခြားသော့ချက်အနုပညာအစီအစဉ်များ Woodbury, နယူးယော့, အောက်တိုဘာလ 4,5ကိုထောကျပံ့ဖို့ upgrade 2016K တပ်ဆင်ပြီး ) ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုပြောင်းလဲကူညီရန်, ကမ္ဘာသစ်ဆငျဖိုနီ, မိုင်ယာမီကမ်းခြေအခြေစိုက်ထားတဲ့ orchestral အကယ်ဒမီနှင့်အတူပူးပေါင်းထားပါတယ် ...
Dimetis PERSEUS ™ powered 4K နှင့် HD ကိုန်ဆောင်မှုများအဆုံးမှအဆုံးသို့ထုတ်လွှင့်စစ်ဆင်ရေးထောက်ခံမှုပေး V-Nova P.Link ပေါင်းစပ်ပြီး
V-Nova PERSEUS ™ဗီဒီယိုအားအလှူငွေကွန်ရက်များ၏စိတ်နှလုံးမှာယခုရရှိနိုင် P.Link အဆုံးမှအဆုံးသို့ကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် Dimetis '' ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် PERSEUS အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဘောင်အမြင်အာရုံ Lossless 4K စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့် (ယူအီးအက်ဖ်အေယူရို 2016 မှာမြင်ကြကဲ့သို့) -powered ပေါင်းစည်းရေးအလှူငွေကွန်ရက်များလန်ဒန်မှာ 4K န်ဆောင်မှုများဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်ယာယီနေရာချထားမှုကိုရိုးရှင်းစွာ, 24 သြဂုတ် 2016 - Dimetis (www.dimetis.de) နှင့် V-Nova (www.v-nova.com) ယနေ့နည်းပညာမိတ်ဖက်ကြေညာခဲ့သည်။ ...